Maamulka Puntland oo qoraal kasoo saaray guushii uu shalay gaaray madaxweyne Farmaajo (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka Puntland oo qoraal kasoo saaray guushii uu shalay gaaray madaxweyne Farmaajo (AKHRISO)
Warqad hambalyo ah oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland ayaa hambalyo loogu diray madaxweynaha cusub ee dowladda federaaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, kaas oo maalintii shalay ku guuleystay doorashada.
Warqadda qoraalka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in Puntland ay muddooyinkii ugu dambeysay ka shaqeynaysay sidii dalka uga dhici lahaa isbadel, ugu dambeyntii ay guul ka gaartay.
Sidoo kale, waxaa warqada lagu sheegay in Puntland iyo shacabkeedaba ay ku qanacsan yihiin guusha uu shalay doorashada ka gaaray madaxweynaha la doortay ee Maxamed C/laahi Farmaajo.
Dhinaca kale, qoraalka ayaa lagu caddeeyay in Puntland ay si buuxdo ula shaqeyn doonto madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, islamarkaana ay Puntland taageeri doonto dowladnimada iyo qaranimada Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, waxaa qoraalka lagu soo gaba-gabeeyay in Puntland ay u rajeeynayso madaxweynaha la doortay Mudane Farmaajo in xilka loo doortay uu Ilaahay ku asturo islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan uu kusoo dhiso xukuumad tayo leh oo dib usoo celisa sumcadda iyo qaranimadda Soomaaliya.
Hoos ka aqriso warqada kasoo baxday xafiiska afhayeenka madaxtooyadda Puntland